Maninona ny Medium.com no manakiana ny paikadim-barotrao | Martech Zone
Alatsinainy Oktobra 7, 2013 Alarobia, Desambra 17, 2014 Larry Alton
Ny fitaovana tsara indrindra amin'ny marketing an-tserasera dia miova tsy tapaka. Raha te haharaka ny fotoana dia mila mihazona ny sofinao amin'ny tany ianao, haka ireo fitaovana farany sy mahomby indrindra amin'ny fananganana mpihaino sy ny fiovan'ny fifamoivoizana.
Ny paikadim-bilaogy SEO dia manasongadina ny maha-zava-dehibe ny atiny sy ny fizarana "satroka fotsy", hahafahanao mampiasa bilaogy fandraharahana, tranokalan'ny manampahefana ary Twitter hananganana ny lazanao nomerika. Ny rindranasa Medium web dia mamokatra feo be izao satria manana ny fahaizana mitondra karazana mpihaino mety amin'ny portfolio-nao amin'ny Internet.
Inona no antonony?
Ny fampiharana tranonkala Medium.com maimaim-poana dia vaovao amin'ny sehatra, izay niseho tamin'ny Internet tamin'ny Jolay 2012 taorian'ny nahazoany miverina amin'ny Twitter. Medium dia tranonkala mifototra amin'ny atiny sy minimalistic izay mampifandray ny mpijery amin'ny lahatsoratra mifandraika sy manampy amin'ny fiainany.
Ireo fidirana bilaogy sy lahatsoratra navoaka tao amin'ny Medium dia antontan-taratasy velona, ​​miaraka amina rafitra fanehoan-kevitra mihetsika izay mamela ny mpamaky hanasongadinana ireo hevi-dehibe sy hanampy ny heviny. Miezaha maka sary an-tsaina kinova mahafinaritra kokoa an'ny Microsoft Word's "Track Changes" ary azonao izany.
Ny resaka napetraka ao amin'ny lahatsoratranao dia tsy miankina mandra-pandinihanao azy ireo ary asio marika ny fanehoan-kevitra ho hitan'ny besinimaro. Ity dia mety ho fomba tsara indrindra handrisihana adihevitra sarobidy.
Tafiditra ao anaty Twitter
Raha mbola ao amin'ny beta i Medium, afaka manomboka voalohany ianao amin'ny fisoratana anarana amin'ny kaonty maimaim-poana amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny Twitter an'ny orinasa. Marina izany: ny zava-drehetra dia entin'ny Twitter amin'ny Medium.
Hifamatotra amin'ny tananao Twitter ny hafatrao, hanamora ny fanarahan'ny olona ny fisianao ara-tsosialy. Ireo mpampiasa salantsalany izay mankafy ny hafatrao dia afaka mamely ny bokotra "Manoro hevitra", izay hanampy amin'ny fampiakarana azy amin'ny laharana Medium.com.
Ny mpamaky dia afaka mizara mora foana ny hafatrao amin'ny Twitter na Facebook fahana. Mifamatotra amin'ny tanany Twitter ny fanehoan-kevitra, amin'izay ianao afaka manara-dalàna ny mpankafy sy manampy azy ireo amin'ny tambajotra sosialy.
Rehefa manoratra momba ny Medium ny olona dia matetika izy ireo no tsy mijery ireo fitaovana fandrefesana. Na izany aza, ny mpampiasa azy ireo isa sy sary azo ampidirina mora foana ao anatin'ny tatitra ataonao isan'andro.
Rehefa ekena ny kaontinao dia azonao atao ny mitsidika ny menio lehibe ary tsindrio ny "Stats." Eto ianao dia hahita rafi-tabilao izay mandrindra ny fomba fijerinao manontolo, ny vakiteny tena izy ary ny tolo-kevitra nataonao tao anatin'ny iray volana lasa.
Ny tahan'ny famakiana dia manome anao ny isan-jaton'ny isan'ny olona manodidina ny atiny hahitanao azy, fa tsy ny fanindriana fotsiny ny lahatsoratra. Ity efijery voalohany ity dia manome anao fomba fijery feno momba ny hafatrao.
Raha te hanao zezika ianao ary hahita ny isa ho an'ny hafatrao manokana, tsindrio fotsiny ny lohatenin'ny lahatsoratra. Hanitsy ny tenany ho azy ny sary mba hanehoana ny refin'ny fifamoivoizanao amin'ity lahatsoratra tokana ity.
Ny takelaka "Reads" sy "Recs" dia azo tsindriana ihany koa, mba hananana sary an-tsary ho an'ireo sokajy tsirairay ireo. Raha miverina amin'ny menio lehibe ianao dia azonao atao ny mijery ny asan'ireo hafatrao. Ny fipihana amin'ity fizarana ity dia hampiseho aminao ny lisitry ireo nanolotra hevitra na naneho hevitra momba ny hafatrao, mba hahafahanao mifandray amin'izy ireo avy eo.
Fanontana fanasana ihany
Amin'izao fotoana izao, ny mpampiasa dia tsy maintsy asain'ny ekipa mpanonta Medium.com hanomboka hamoaka amin'ny tranokala. Afaka misoratra anarana kaonty mpamaky mora foana ianao ary miditra amin'ilay lisitra hahazoana fankatoavana amin'ny editor. Ampiasao ny fotoana fiandrasana hitadiavana mpanoratra hafa ao anaty akany, hanomezanao hevitra momba ireo lahatsoratra mifandraika amin'izany ary hampiakarana ny fahitan'ny orinasa anao.
Raha vantany vao mahazo fanamafisana avy amin'ny Medium.com ianao dia afaka manomboka ny fizotry ny fandrafetana sy ny famoahana. Ny fizotry ny fandrafetana dia miara-miasa ihany koa. Medium dia mamela anao hizara drafitra efa mandroso amin'ny mpikambana hafa, izay afaka maneho hevitra sy mandray anjara amin'ny vokatra vitao.
Tags: CMSrafitra fitantanana atinyantononyfitantarana
Fanatsarana: atiny, làlana, fipetrahana ary fiovam-po